Depiote F�lix Randriamandimbisoa � Aleo hirosoana ny fitsipaham-pitokisana �
Mankasitraka ny fandraisana andraikitra efa natomboky ny SMM (Sendikan�ny Mpitsara eto Madagasikara) manoloana ny tsy fandehanan�ny tontolon�ny fitsarana amin�ny ankapobeny eto Madagasikara ny depiote Randriamandimbisoa F�lix.
Manohana sy mampirisika ny finiavan’ny fianakaviamben’ny mpitsara hahatojo hatramin’ny farany ny fitakian’izy ireo hampihatra ny didim-pitsarana mikasika an’i Claudine Razaimamonjy ihany koa ny tenany. Fanitsakitsahana ny Lalàmpanorenana mametraka mazava ny fisarahan’ireo fahefana 3 ny fitsabahan’ireo minisitra sy ny loholona mpanao lalàna amin’io raharaha mahavoasaringotra ny mpanolotsaina manokan’ny filohan’ny Repoblika io. Vahaolana ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta Mahafaly Solonandrasana, hoy ity solombavambahoaka Tiako I Madagasikara avy ao amin’ny boriborintany faha-4 ity. Manentana ireo depiote rehetra hifanohana amin’izany rahateo ny mpitarika ny vondrona parlemantera TIM mandritra izao fivoriana ara-potoanan’ny Antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza izao.